तपाईंको कालो ओठ गुलाबी बनाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउँनुस् यी पाँच टिप्स | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
तपाईंको कालो ओठ गुलाबी बनाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउँनुस् यी पाँच टिप्स
माघ २८ गते, २०७५ - १२:२३
एजेन्सी । चुरोट पिउने मानिसको ओठ कालो हुन्छ भनिन्छ । जे भएता पनि ओठ कालो धेरै मानिस समाधान खोजिराखेका हुन्छन् । त्यस्तै, जाडोमा ओठ फुट्ने समस्या पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन यी चिजको उपयोग गर्न सकिन्छ स्
चिनी र मह
दुई चम्चा चिनीमा आधा चम्चा मह, भेनिला एसनस र आधा चम्चा जैतुनको तेल मिलाउनुहोस् । केही बेरपछि ओठमा मसाज गर्नुहोस् । तपाईंको ओठ नरम हुनेछ । त्यस्तै, एक चम्चा चिनीमा आधा चम्चा मह मिसाएर ओठको मसाज गर्नुहोस् । दुई मिनेटपछि यसलाई मनतातो पानीले धुनुहोस् । यसपछि तैलीय पदार्थ लगाउन नभुल्नुहोस् ।
खाने सोडा ९बेकिङ सोडा०मा केही तेल मिलाउनुहोस् । अनि, ओठमा लगाएर १०–१५ मिनेटजति मोल्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंको ओठ बिस्तारै गुलाबी हुँदै जान्छ ।
एक चम्चा चिनीमा केही थोपा जैतुनको तेल मिसाएर लगाउनुहोस् ।
यसले ओठ फुटेको निको हुन्छ ।
कफीलाई मजाले पिस्नुहोस् । अनि, दूधमा मिलाएर ओठमा दल्नुहोस् । केही बेरपछि मनतातो पानीले धुनुहोस् । अनि, तपाईंको कालो ओठ गुलाबी हुनेछ ।
कोमल खालको टुथब्रसले ओठमा हल्का तरिकाले रगड्नुहोस् । यसो गर्दा ओठमा भएका डेड सेल निक्लिन्छन् । यो ओठ नरम बनाउने सबैभन्दा सरल उपाय हो ।
माघ २८ गते, २०७५ - १२:२३ मा प्रकाशित
यस्तो ठाउँ, जहाँ जोडीले सुहागरात मनाएर नसक्दासम्म त्यही कोठामा बस्छिन् आमा